DAAWO: Tan kala qabsatay Sanchez iyo Tababare Solskjaer….(Sanchez waa u dhammaan lahayd haddii uu FALKAAN ku sameyn lahaa Ferguson ama Mourinho) – Gool FM
DAAWO: Tan kala qabsatay Sanchez iyo Tababare Solskjaer….(Sanchez waa u dhammaan lahayd haddii uu FALKAAN ku sameyn lahaa Ferguson ama Mourinho)
Byare January 5, 2019
(England) 05 Jan 2019. Manchester United ayaa u soo gudubtay wareega 4-aad ee FA Cup kaddib markii ay 2-0 uga adkaatay naadiga Reading.
Alexis Sanchez oo lagu soo bilaabay ciyaarta ayaa la badelay daqiiqadii 64-aad, balse nasiib darro wuxuu doortay Kursi qaldan oo wuxuu salka dhigay fadhiga Tababarae Ole Gunnar Solskjaer.
Tababaraha ku meel gaarka ee Man United ayaa si asluubeysan booskiisa uga kacsaday Sanchez iyadoo xitaa la arkayay tababare ku xigeen ka kooxda ee Mike Phelan oo laacibka reer Chile u tilmaamaya inuu booska isaga koco.
Taageerayaasha oo ku soo yaacay baraha blushada iyagoo ka fal celinaya sheekadaan ayaa sheegay in Sanchez uu nasiib leeyahay maadaama ay balaayo ka raaci lahayd haddii uu fariisan lahaa booska tababarayaashii ka horreeyay Solskjaer sida Mourinho iyo Ferguson.
“Mourinho Sagaal bilood ayuu keydka ku cabi lahaa Sanchez falkan dartii.” Taageere ayaa sidaa ku soo qoray Twitter.
Ku kalaa yiri: “Farguson falkaan wuuba ku iibin lahaa Sanchez.”.
Valverde oo ka hadlay kulanka Getafe, isagoo dhinaca kale iska indho tiray arimah ku aadan heshiiskiisa kooxda Barcelona
Arsenal oo si Sahlan ugu soo gudubtay wareega 4-aad ee FA Cup xilli uu Joseph Willock noqday laacibkii ugu....+SAWIRRO